कसरी पड्किन्छ ग्यास ? यसरी गर्न सकिन्छ सुरक्षा – Hamrosandesh.com
कसरी पड्किन्छ ग्यास ? यसरी गर्न सकिन्छ सुरक्षा
खाना पकाउने ग्यासको उपभोग वर्षेनी बढ्दै गएसँगै त्यो पड्किने घटना समेत बढ्दै गएको छ। गत पुस ५ गते बीरगंजस्थित सुपा ग्यास उद्योगमा आगलागी हुँदा दुई जना अग्नी नियन्त्रकको मृत्यु भयो। सो उद्योगमा ग्यास लिक भई आगलागी भएको थियो।
गत पुस ७ गते धादिङको गल्छीमा पुरानो एलपी ग्यास पड्किदा एक घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भयो। गत वर्षको फागुनमा ग्यास सिलिण्डर पडकिँदा एक जना प्रहरी जवानको मृत्यु भयो भने आठ जना घाइते भए।
तर हालसम्म ग्यास पड्किएर ज्यान गुमाउनेको यकिन संख्या भने आधिकारीक निकायसँग छैन।
किन पडकिन्छन् ग्यासरु
सिलिण्डर भन्दा कम्तीमा ६ इन्च माथि ग्यास चुलो राख्नुहोस्। कहिलै पनि चुलोभन्दा सिलिण्डर माथि राख्नु हुँदैन। त्यस्तै ग्यासको रबर पाइप १।५ देखि २ मिटरभन्दा लामो हुनु हुँदैन्।